April | 2016 | cowslafil news network
Daawo Jaaliada Uk Ee Shabeelada Hoose Oo Baroor Diiq U Sameysay Ciyaalkii Iyo Waayeeshii Sida Arxan La’aanta Ah Loogu Xasuuqay Duleedka Shalambood
by cowslafil On April 30, 2016 0 Comment
Jaaliyada kasoo jeeda Shabeelada hoose ee ku dhaqan Dalka Uk ayaa kulan baroor diiq u sameeyey dadkii shacabka ahaa ee dhawaan lagu xasuuqay deegaanka Dudumo ee Gobolka Shabeelada hoose. Kulanka Baroor diiqd ah oo ay kasoo qeyb galeen dad kala duwan ayaa lagu cambaareeyey falkii foosha xumaa ee ay ku kaceen Mooryaanta habar gidir oo […]
Suldaan Bashiir Geele Oo Baaq U Diray Dawladaha Dirta Iyo Daaroodka
Suldaan Bashir & Suldaan AbdiQawi oo ka hadlay caruurta iyo ayeeydood ee lagu gubay Sh. Hoose
by cowslafil On April 26, 2016 0 Comment
Dhageyso Taliye Maxamed Xuseen Adeerey Oo Warbaahinta Uga Warbixiyey Dib Ugu Soo Laabashadiisa Magaalada Marka
by cowslafil On April 25, 2016 0 Comment
Abaanduulihii hore ee ciidamada deegaanka Maxamed Sheekh Xuseen Adeerey xiliganna ah Taliye ka tirsan Nabadsugidda Maamulka Koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey dib ugu soo laabashadiisa magaalada Marka oo uu muddo ka maqnaa. Taliyaha oo maalmo ka hor gaaray Magaalada Marka ayaa markii ugu horeysay warbaahinta uga warbixiyey xaaladda amni xumo ee magaalada Marka ka jiro […]
Suldaan Bashiir Geelle oo ka hadlay Abaaraha Somaliland iyo Xusuuqa Sh.Hoose
by cowslafil On April 18, 2016 0 Comment
Halkan ka daawo Shir jaraa’id Suldaan Bashiir Geelle oo ka hadlay Dhibaatooyinka faraha badan ee lagu hayo shacabka Gobolka Sh. Hoose, iyo abaaraha ka dhacay Jamhuuriyada Somaliland. cowslafil.com
Tacsi: Maxamed Abdulkadir oo ku geeriyoodey Sweden, Inaa lillaahi Wa Inaa Illeyhu raajicuun
by cowslafil On April 14, 2016 0 Comment
Inaa lillaahi Wa Inaa Illeyhu raajicuun, Marxuum Maxamed Abdulqadir ayaa ku geeriyooday dalka Sweden, magaalada Stockholm galabta, khamiis 14.april.2016. Marxuum Maxamed Abdulqadir oo ahaa nin aad u qiimo badan magac iyo miisaana ku lahaa bulshada reer Sweden guud ahaan, iyo gaar ahaan asxaabta, ehelada, qaraabada, iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed ayaa galabta ku geeriyooday dalkan Sweden. […]
by cowslafil On April 10, 2016 0 Comment
Wararka ka imaanaya deegaanka Baacadweyne ee Gobolka Mudug ayaa kusoo waramaya in halkaasi ay ka taagantahay xaalad biya la’aan oo aad u daran ka dib markii ay gureen inta badan ilihii laga cabi jirey biyaha. Dadka ku dhaqan Baacdweyne ayaa soo sheegaya in haatan xaalad adag ay ku suganyihiin dadka iyo duunyada ku dhaqqan halkaasi […]
BARNAAMIJ GAARA GUDIGA CUSUB EE JAALIYADA SOOMAALIYEED EE UK .
by cowslafil On April 09, 2016 0 Comment
Siyaasi Daahir Xaaji Boqore arrimaha xusuuqa uu ka hadlay maxaa iska bedelay maanta?